Kitra - ewa.mg
Kitra sy Covid-19 : nahazo tohana mitentina 25 tapritrisa Ar ny ligy 22
Foot - News - Santé - Sport - News Mada
Mbola tsy afaka am-bavan’ny olona rehetra ny fahafatesan’i Kasaona Roger, voalaza fa matin’ny coronavirus. Olona tena fantatra teo amin’ny sehatry ny fanatanjahantena, indrindra fa ny baolina kitra tao Toamasina, Itompokolahy.Niaina ary tena nandany ny androny teo amin’io taranja io izy fony fahavelony. Porofon’izany, izy no tale teknika rezionaly (DTR)-n’ny seksiona Toamasina. Vao 17 taona izy dia efa “surclassé”, tao amin’ny klioba 3FB, izay nahatonga azy ho mpiasan’ny fahasalamana tao Toamasina. “Libero” no toerana nisy azy teny ambony kianja. Efa maro ny klioba nilalaovany toa ny Fifafifi ary ny ASF Fortior (Levandana), namaranany ny fiakarana kianja. Tsy niala lavitra ny baolina kitra izy fa nanangana ny La Fureur Club, sokajy vehivavy ary voatendry ho mpanazatran’ny ekipa voafantin’Antsinanana, ka nandrombaka ny ho tompondakan’i Madagasikara. Taorian’izay, nitaiza ireo tanora tao Toamasina ka anisan’ireny i Anderson (Papo), mpilalaon’ny AS Adema, teo aloha sy i Sidoré, tao amin’ny Uscafoot, raha tsy hilaza afa-tsy ireo. Mpilalao baolina kitra ihany koa ny zanany, i Rieul, nandrafitra ny Club M Mananara, niatrika ny “Orange pro league”, teo.Tsy ny baolina kitra ihany no nahalalana an’i Roger fa teo amin’ny taranja atletisma. Efa tompondakan’i Toamasina, teo amin’ny 100 m fony izy tao amin’ny klioba Ascut. Olona tsotra, mamy hoditra teo amin’ny fiaraha-monina ary tia manampy sy manoro hevitra ireo tanora amin’ny lafiny rehetra. Namela kamboty, telo mianadahy i Kasaona Roger. TorcelinL’article Kitra sy coronavirus: mpilalao sady mpanazatra i Kasaona Roger a été récupéré chez Newsmada.
Kitra any Eoropa – «Ligue des champions»: mety hatao ny 29 aogositra ny famaranana
Efa eo am-pandinihana ny hanohizana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, taranja baolina kitra, amin’izao fotoana izao, ny fiombonan’ny baolina kitra ao Eoropa (UEFA). Betsaka ny hevitra mandeha ka misy fe-potoana efa naroson’ireo tomponandraikitra ny hanatontosana ny famaranana, ny 29 aogositra ho avy izao any Istambul. Telo andro aorian’izay kosa ny an’ny fiadiana ny amboara na ny “Ligue Europa”.Heverina hotaperina amin’ny faran’ny volana aogositra 2020 mantsy ny taom-pilalaovana ho an’ny baolina kitra any Eoropa. Araka izany, efa nisy fampiantsoana ireo federasiona rehetra mandrafitra ny UEFA, izay mbola mitohy hatramin’ny androany alakamisy 23 avrily.Raha tsiahivina, efa tonga eo amin’ny dingana ampahefa-dalana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa ka ekipa efatra ny efa nahazo ny tapakila hiatrehana izany: ny Paris St Germain, ny Atlanta, ny Atletico de Madrid ary ny Leipzig. Tompondaka L’article Kitra any Eoropa – «Ligue des champions»: mety hatao ny 29 aogositra ny famaranana a été récupéré chez Newsmada.
Manohy ny lalany ny Barean’i Madagasikara, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra “Can 2019”. Resiny, teo amin’ny ampahavalon-dalana, ny Leopard-n’i Kongo. Fandresena miezinezina ho an’ny Malagasy,… nampiaiky izao tontolo izao!Nanoratra tantara vaovao, eo amin’ny baolina kitra afrikanina, indray ny Barean’i Madagasikara. Fandresena miezinezina ny azony, omaly, nanoloana ny Leopard-n’ny RD Kongo, teo amin’ny dingana ampahavalon-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, taranja baolina kitra.Manohy ny diany mankany amin’ny ampahefa-dalana indray ny Barean’i Madagasikara. Miaiky izao tontolo izao, ary vaky vava ireo mpanao gazety maneran-tany fa mahay ny Malagasy ary tena ekipa kely, toa an’i Davida, nandavo an’i Goliata. Nanimba sy nanapotika ireo firenena goavana rehetra, eto Afrika, tamin’ity “Can 2019” ity.Raha hiverenana ny fihaonana, omaly tao amin’ny kianja Alexandrie, resin’ny Barean’i Madagasikara, tany amin’ny fandakana ny “tirs au but”, 4 no ho 2, ny Kongoley. Fihaonana nampitaintaina, hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany ary nila hanampina ny fofonain’ireo rehetra nijery sy nanaraka izany mivantana.Nitarika anisa hatrany ny Barea, ary nanenjika ry zareo Leopard-n’i Kongo. Nahatafiditra ny baolina voalohany i Ibrahim Amada, teo amin’ny minitra faha-9, tamin’ny alalan’ny daka mandrivorivo.Varimbariana kely ny BareaNifamaliana avy eo ny fanafihana ary niezaka nanao izay ho afany ry Maghoma sy ry Mulumbu, saingy nahay niaro tena hatrany ry Bapasy sy i Metanire ary i Fontaine. Na izany aza, nisy fotoana somary natoritory ny Barea, hany ka nanao totoafo ny Kongoley. Nosahalainy mihitsy izany, teo amin’ny minitra faha-21, tamin’ny alalan’i Bakambu. Io isa 1 sy 1 io ny nentin’ny roa tonta niala sasatra.Samy niezaka nitady irika namonoana baolina ny roa tonta teo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Nitarika indray ny Barea, taorian’ny tolotra nataon’i Metanire, ho an’i Ima, izay namono ny baolina tamin’ny lohany, teo amin’ny minitra faha-77. 2 no ho 1 ny isa teo. Nanidy trano ny Barea avy eo, saingy totoafo ny fanafihan’ny Kongoley. Nosahalain-dry zalahy izany, tany amin’ny 89 mn. Voatery niditra teo amin’ny fanalavam-potoana ny roa tonta, saingy tsy nisy ihany ny baolina tafiditra. Afa-bela tamin-dry zareo Kongoley ny Barean’i Madagasikara . Izay tafavoaka amin’i Tonizia sy i Ghana, amin’ny lalao anio, no hidona amin’ny Barean’i Madagasikara. Tompondaka L’article «Can 2019» miaiky izao tontolo izao: tafita amin’ny 1/4-dalana ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Kitra atsy Afrika Atsimo: nahafaty ny baolina voalohany ho azy, i Dax
Manomboka mametraka ny anarany, eo amin’ny fifaninanam-pirenena, Afrikanina tatsimo, i Andriamirado Aro hasina (Dax). Porofon’izany, nahatafiditra baolina ny tovolahy, ny asabotsy lasa teo.Ela ny ela ka nahatafiditra ny baolina voalohany, ho azy, i Dax, ilay Malagasy milalao ao amin’ny Kaizer Chiefs, Afrika Atsimo. Fihaonana, tafiditra amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Praiminisitra Absa, notanterahina ny asabotsy 13 aprily lasa teo, tao amin’ny kianja Thohoyandou. Nisaraka, ady sahala, 1 sy 1 tamin’ny Black Léopards, ny ekipan’i Dax, tamin’izany. Ny Kaizer Chiefs, no nampiditra ny baolina voalohany, teo amin’ny minitra faha-11, tamin’ny alalan’ny daka mandrivorivo, nataon’i Dax, rehefa nahazo tolotra avy amin’i Kabelo Mahlasela. Nosahalain’ny Black Leopards, kosa izany teo amin’ny minitra faha-23. Baolina tafiditr’i Hlongwane. Tsy niova intsony io isa io, mandrapirava, na samy nanao izay ho afany aza, ny roa tonta. Marihina fa mbola saika nampiditra baolina faharoa, i Dax, teo amin’ny minitra faha-76 saingy nidona tamin’ny vodilaharana ny dakany, tamin’ny tongotra havia. Tsiahivina, fa avy hatrany, dia nataon’ny mpanazatra, tompon-toerana i Dax, ary ilalao nandritra ny 90 mn. Nahafa-po, ny mpijery sy ny mpanazatran’ny Kaizer chiefs, ny endri-dalao nasehon’i Dax, tamin’ity fihaonana ity, izay efa manomboka matotra sy manana fahatokisan-tena, eny ambony kianja. Ao anatin’ny heriny sy ny tanjany tanteraka i Dax, amin’izao fotoana izao. Izy izay takin’ny mpijery baolina malagasy, mba ho anisan’ireo, ho antsoina hanatevina ny Barea de Madagascar, amin’ny fiatrehana ny “Can 2019”. Mbola miankina amin’ny fanapahan-kevitr’i Nicolas Dupuis, anefa izany, izay tsy nanafina fa mahay i Dax, ary manana ny toerany ao amin’ny ekipam-pirenena, saingy miankina amin’ny fanapahan-kevitry ny “comité de normalisation” sy ny Fosa Juniors, ny amin’ny hiantsoana azy, na tsia. TompondakaL’article Kitra atsy Afrika Atsimo: nahafaty ny baolina voalohany ho azy, i Dax a été récupéré chez Newsmada.
Nitohy, ny asabotsy sy omaly alahady, ny andro faharoa, amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “THB ligue des champions”, taranja baolina kitra. Tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, nisaraka ady sahala, 2 no ho 2, ny Jet Mada Itasy sy ny Fosa Jr Boeny. Azo lazaina fa tratry ny tsy nampoizina ihany ny ekipan’Itasy izay efa nitarika tamin’ny isa, 2 no ho 0 teo amin’ny fizaram-potoana voalohany. Baolina matin’i Tsiry sy i Tsito, tamin’ny alalan’ny “pénalty”.Nosahalain’ny Fosa Jr izany teo amin’ny fidirana faharoa, tamin’ny alalan’ny “pénalty”, tafiditr’i Baggio. Tsy nijanona teo fa mbola nanampy ny isa ho azy indray ny ekipan’i Boeny, tamin’ny alalan’ny “coup francs” matin’i Santatra, nahavery an’i Joma, mpiandry tsatobin’ny Jet Mada Itasy.Ankoatra izay, tany Toliara, resin’ny AS Adema Analamanga, tamin’ny isa 2 no ho 1, ny 3FB Atsimo Andrefana. Tany Fianarantsoa, nisaraka ady sahala 1 sy 1, ny FC Zanakala sy ny Ajesaia. Teny Vontovorona kosa, nahiliky ny Cnaps sport tamin’ny isa 5 noho 1 ny FC Ilakaka. Tompondaka L’article Kitra – «THB ligue des champions»: Jet Mada Itasy (2) – (2) Fosa Jr Boeny a été récupéré chez Newsmada.
Tontosa, ny asabotsy lasa teo tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina, ny andiany faharoa, amin’ny Kick-off – «Futsal tournament 2019». Voahosotra ho tompondaka ny UCM (Université catholique de Madagascar), rehefa nandresy ny Imgam, teo amin’ny famaranana, tamin’ny isa 6 no ho 4. Niady ny lalaon’ny roa tonta satria nifanenjehana ny isa teny amin’ny solaitrabe. Nisaraka tamin’ny isa mitovy, 3 no ho 3, ny roa tonta, teo am-pialan-tsasatra. Efa tany amin’ny 10 mn farany vao afaka ny UCM. Nitana ny laharana fahatelo ny IUM (Institut des universités de Madagascar).Voahosotra ho mpilalao nampiditra baolina be indrindra i Rado avy amin’ny IUM ary i Rejela, kapitenin’ny Imgam, kosa ny mpilalao mendrika. Nomena ny mpianatra avy amin’ny Esmia ny amboaran’ny “fair-play” ary ny mpanohana ny INTH no nandrombaka ny “meilleur supporteur”.“Afa-po izahay ary misaotra ireo mpanohana sy ny mpijery ary ireo mpandray anjara rehetra, ianareo mpanao gazety, tamin’ity andiany faharoa ity. Ezahina ny hanatsara ny andiany fahatelo”, hoy Rajaona Davida, filohan’ny IEP, mpikarakara. Torcelin L’article Kick-off – «Futsal tournament 2019»: norombahin’ny UCM ny amboara a été récupéré chez Newsmada.
KITRA – «UEFA CHAMPIONS LEAGUE» :: Nanara-dia ny PSG ho any amin’ ny ampahavalon-dalana ny Lyon
Ny klioba frantsay, Olympique Lyonnais (OL), no ekipa faha-16 tafita hiatrika ny dingan’ny ampahavalon-dalana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa ho an’ireo klioba na ny “Uefa Champions League”, taranja baolina kitra. Nisaraka ady sahala, 1 sy 1, izy ireo sy ny Shakhtar Donetsk, ny alarobia alina lasa teo tany Kiev. Tao anatin’ny rano- mandry no nanaovana ity lalao namaritra ny ekipa faha-16 hiatrika ny dingana manaraka ity. Tamin’ny lalao mandroso dia nisaraka ady sahala, 2 sy 2, ny roa tonta tany amin’ny kianjan’i Lyon. Satroka roa Nitarika tamin’ny alalan’ny isa 1 noho 0, teo amin’ny minitra faha-22 ny solontenan’i Ukraine, tamin’ity lalao miverina ity, tamin’ny alalan’i Junio Moraes. Efa tany amin’ny minitra faha-65 vao nahasahala ny isa i Nabil Fekir, kapitenin’ny Olympique Lyonnais, ka nahatonga azy ireo ho tafita amin’ny dingana manaraka. Hotanterahina any Nyon Soisa, amin’ny alatsinainy 17 desambra ho avy izao, ny antsapaka hahafantarana izay hifanandrina amin’ity dingan’ ny ampahavalon-dalana ity. Hozaraina ao anatin’ny satroka roa ireo ekipa enina ambin’ny folo ka napetraka ho lohan’andiany ireo laharana voalohany tao amin’ny vondrona. Isan’ireny ny Barcelone (ESP), Bayern Munich (GER), Borussia Dortmund (GER), Juventus (ITA), Manchester City (ENG), Paris (FRA), Porto (POR), Real Madrid (ESP). Ao amin’ny satroka faharoa kosa ireo laharana faharoa dia ny Ajax Amsterdam (NED), Atlético Madrid (ESP), Liverpool (ENG), Lyon (FRA), Manchester United (ENG), Roma (ITA), Schalke 04 (GER), Tottenham Hotspur (ENG). Klioba Anglisy efatra, Alemana telo, Espaniola telo, Italiana roa, Frantsay roa, Portigaly iray ary Pays Bas iray no tafita hiatrika an’ity dingana ity . Hotontosaina amin’ny 12/13, 19/20 febroary 2019 sy amin’ny 5/6, 12/13 marsa 2019 ho avy izao ireo lalao mandroso sy miverina hanamarika ny dingan’ny ampahavalon-dalana ho an’ity fifaninanana kaontinantaly ity. L’article KITRA – «UEFA CHAMPIONS LEAGUE» :: Nanara-dia ny PSG ho any amin’ ny ampahavalon-dalana ny Lyon est apparu en premier sur AoRaha.
Ny ekipan’i Afrika Atsimo indray no miandry ny Elgeco Plus, amin’ny lalao ampaha-valondalana, fifaninanana afrikanina, taranja baolina kitra, taorian’ny fandresena azony nanoloana ny ekipan’ny Ginea Ekatoraly. Ny 14 desambra izao indray no hiakatra an-kianja ny Elgeco Plus ka ny ekipan’ny Kaizers Chiefs avy any Afrika Atsimo no hifanandrina aminy. Lalao mandroso, savaranonando, io hatrehan’ny ekipa malagasy io, hotontosaina any Afrika Atsimo. Ny faha-21 ny volana desambra kosa ny lalao miverina izay hatao eto Madagasikara. Raha tsiahivina, nolavoin’ny Deportivo Undidad tamin’ny isa 2 no ho 1 ny Elgeco Plus, ny alarobia lasa teo, nandritra ny lalao miverina, tany Ginea Ekatoraly. Tafakatra amin’ny dingana manaraka ihany anefa ny ekipa malagasy, rehefa natao ny tambatr’isa ka nanome, 4 no ho 3. Mbola ady goavana ity hatrehina afaka tapa-bolana ity ka ilaina fahavononana avy amin’ny mpilalao tsirairay, raha ny fanazavana nentin’ireo mpilalao. Mila maka lesona ihany koa manoloana ny faharesena tamin’ny Ginea Ekatoraly iny, indrindra amin’ny fanaovana tandrevaka eny ambony kianja, raha ny fanazavana hatrany. Mi.RazL’article Kitra Afrikanina: ny Kaizers Chiefs no miandry ny Elgeco Plus a été récupéré chez Newsmada.
BAOLINA KITRA – “CAN 2019” :: Nokitikitihan’ny CAF i Afrika Atsimo
Taorian’ny nanesorana tamin’i Caméroun ny fampiantranoana ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019 dia manomboka mitady firenena hafa homena izany ny Kaonfederasiona afrikanina ho an’ny taranja baolina kitra (CAF). Isan’ireo nokitikitihan’ity rafitra afrikanina ity ny Federasionan’i Afrika Atsimo. Tamin’ny alahady lasa teo no voalazan’ny Federasiona afrikanina tatsimo fa “noresahan’ny CAF” izy ireo handray an’ity fifaninanana ity. “Mila miresaka amin’ny governemanta izahay vao afaka mamaly izany fiangavian’ ny CAF izany. Tsy afaka ny hangataka fanampiana amin’izy ireo ihany koa izahay satria mandalo fotoan-tsarotra ny fiainana ara-tsôsialy aty aminay ankehitriny. Mety ho sarotra ny haneken’ny governemanta izany”, hoy i Russel Paul, filoha lefitry ny Federasiona afrikanina tatsimo ho an’ny baolina kitra (SAFA). Raha toa ka manaiky an’izany soson-kevitry ny CAF izany ny governemanta any an-toerana dia heverina fa fahadisoam-panantenana no mahazo an’i Maraoka, izay efa naniry mafy ny hampiantrano izany, taorian’ny faha-sahiranana teo amin’i Caméroun. L’article BAOLINA KITRA – “CAN 2019” :: Nokitikitihan’ny CAF i Afrika Atsimo est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra eran-tany – «Ballon d’or 2018”: lasan’i Modric ny amboara, tsy nipoitra i CR7 sy i Messi
Tontosa, ny alatsinainy 3 desambra lasa teo, tany Paris, Renivohitr’i Frantsa, ny fanolorana ny “Ballon d’or 2018”, taranja baolina kitra. Voafidin’ireo mpanao gazety 180 maneran-tany sy ireo mpanazatra avy amin’ny vazan-tany efatra hibata izany amboara izany ilay Kroaty, i Luka Modric, irakiraka mpanafika ao amin’ny Real de Madrid. Ny zava-bitany ka nampisongadina azy tamin’ireo lalao rehetra nataony no tena naharesy lahatra ireo mpifidy nahazoany ity “Ballon d’or 2018” ity. Raha tsiahivina, nandrombaka ny tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, niaraka tamin’ny Real, ny tovolahy ary niatrika ny famaranana ny “Mondial 2018”, tamin’i Kroasia. Nahazo isa 753 izy, nanoloana an’i Cristiano Ronaldo, isa 476. Fahatelo ilay Frantsay, i Antoine Griezmann, isa 414, narahin’i Mbappé, isa 347. Tany amin’ny laharana fahadimy kosa ilay Arzantin, i Lionel Messi, nahazo isa 280. Azo lazaina fa tsy nahazaka ny fahareseny, tamin’ity, i Messi sy i Ronaldo, izay efa mpandrombaka matetika ity “Ballon d’or” ity ka tsy niseho tao amin’ny lanonam-panolorana ny amboara. Fihetsika tsy nampiseho “fair-play” ary nanankianan’ny ankamaroan’ireo olona manan-kaja marobe tonga tao an-toerana. Nomena an’i Kyllian Mbappé kosa ny “trophée Kopa”, natokana ho an’ireo mpilalao latsaky ny 21 taona. I Ada Hegerberg, teratany norvezianina, milalao ao amin’ny Olympique Lyonnais, kosa ny nandrombaka izany ho an’ny vehivavy. TompondakaL’article Kitra eran-tany – «Ballon d’or 2018”: lasan’i Modric ny amboara, tsy nipoitra i CR7 sy i Messi a été récupéré chez Newsmada.
Nametraka ny anarany tao anatin’ireo mpilalao baolina kitra misongadina ny faran’ny herinandro lasa teo, ilay Malagasy Ilaimaharitra Marco. Nahavita dingana goavana ny tovolahy, nandritra ny andro faha-17 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Belzika, Diviziona 1. Nahatafiditra baolina mantsy izy tao anatin’ny fihaonan’ny ekipany Royal Charleroi Sporting Club sy ny Cerclebrugge KSV. Fihaonana, notanterahina ny asabotsy 1 desambra lasa teo, tao amin’ny kianja Charleroi. Nivoaka ho mpandresy tamin’ny isa, mazava 3 no ho 1 ry Marco, tamin’izany. Nahafaty ny baolina fahatelo, ho an’ny ekipany Ilaimaharitra Marco, teo amin’ny minitra faha-59. Marihina fa tompon-toerana, ny tovolahy, tamin’izany fihaonana izany. Manana isa 30 ny Royal Charleroi Sporting Club, taorian’ity fandresena azon’izy ireo ity, ary mipetraka eo amin’ny laharana fahefatra vonjimaika. Marihina fa anisan’ireo mpilalao mpila ravinahitra nantsoin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar Ilaimaharitra Marco, nandritra ireny fifanintsanana niadian-toerana ho an’ny “Can 2019”, ireny. Tompondaka L’article Kitra any Belzika: nahatafiditra baolina Ilaimaharitra Marco a été récupéré chez Newsmada.
Ao anatin’ny fifantenana ho mpilalao sy mpanazatra ary ekipa mendrika sy nahavita be, amin’izao fotoana izao, ny Kaonfederasiona afrikanina baolina kitra (Caf). Anisan’ny hiady izay ho mpilalao mendrika aty Afrika i Faneva Ima. Tafiditra ao anatin’ireo hosafidina eo amin’ny fiadiana ny “Glo Caf award 2018” na ireo mendrika aty Afrika eo amin’ny taranja baolina kitra ny Barea de Madagascar. Anaram-boninahitra telo ny indray hiadiany amin’izany. Voalohany amin’izany, hifaninana ho mpilalao mendrika Andriantsima Faneva Ima, kapitenin’ny Barea de Madagascar. Raha tsiahivina, anisan’ny naharesy lahatra ny rehetra ka nahatafiditra azy ho ao anaty lisitra hofidina izao ny nahafatesany baolina hatrany teo amin’ny fifanintsanana, niadiana toerana ho amin’ny “Can 2019”. 34 taona ny lehilahy ankehitriny, ary lohalaharana ao amin’ny Clermont Foot, “ligue 2” any Frantsa. Miisa 34 mirahalahy izy ireo no hiady ity ho mpilalao mendrika amin’ny “Glo caf award 2018” ity. Anisan’izany ilay Egyptianina, i Mohamed Salah, milalao ao amin’ny Liverpool. Misongadina koa ity Egyptianina ity eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Angletera, noho ny fahaizany mamono baolina. Mbola hifampitana amin’i Faneva Ima koa ilay Senegaley, i Sadio Mané, lohalaharan’ny Liverpool. Mpilalao efa diso fantatry ny Malagasy sy ny Barea tsara izy. Mbola hikatroka amin’ny Barea izy eo amin’ny andro farany amin’ny fifanintsanana ho an’ny “Can 2019”. Ankoatra izay, hifaninanana ny ho mpanazatra mendrika koa i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar. Nahavita dingana goavana ihany koa izy satria hatramin’izay nitondrany ny Barea, indroa ihany no tojo faharesena. Farany, hiady ny amboara ho an’ny ekipa nahavita ezaka be, tamin’ity taona ity, ny Barea de Madagascar. Tsara toerana tokoa ny Barea handrombaka azy ity satria nampiaiky ireo teknisianina rehetra ny zava-bitany sy ny filaharana misy azy eo amin’ny Fifa. Hotanterahina ny 8 janoary 2019 ao Abidjan, Côte d’Ivoire, ny fizarana ny loka ho an’ity “Glo Caf award 2018” ity. Tompondaka L’article Kitra afrikanina: hifaninana amin’ny “Glo Caf Award 2018” i Faneva Ima a été récupéré chez Newsmada.